သင် Dutchtown ဂုဏ်ယူနေပါသလား • DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
သင် Dutchtown ဂုဏ်ယူနေပါသလား
အပေါ် Posted ဇွန်လ 30th, 2020
သင့်မှာကြားပါ Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ် အမှတ်လက္ခဏာ ဒီမှာ:
ငါတို့မြို့၏အတိတ်၏အလေးချိန်ကိုခံယူပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားစွာရပ်တည်သောရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သော Dutchtown မှကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စိန့်လူးဝစ္စ၏လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးသောရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးထွားမှု၊ ကျုံ့မှုနှင့်ကြီးထွားမှုတို့ကိုထပ်မံခံစားခဲ့ရသည့်ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ်.
Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ် ၏ Chip Smith ကဗီဒီယို Grand Cross.
ကျွန်တော်တို့ထဲကတချို့ဟာ Dutchtown မှာအမြဲတမ်းနေခဲ့ရတယ်။ လွန်ခဲ့သောအနှစ်တစ်ရာကျော်ကကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများသည်စိန့်လူးဝစ္စတောင်ပိုင်းတွင်အချိန်စမ်းသပ်မှုကိုခံရပ်ခဲ့သောအုတ်အဆောက်အအုံများ၊ ချာ့ချ်များနှင့်လမ်းများကိုဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ မိတ်ဆွေအချို့ရွေ့လျားသွားသည်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလာသည်နှင့်အိမ်နီးချင်းများ၏မျက်နှာများပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ငါတို့ဘယ်နေရာမှာမှမနေဘူး
ငါတို့ထဲကတချို့ဟာအခွင့်အလမ်းအသစ်တွေအတွက် Dutchtown ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးအရအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှိနေခြင်း Dutchtown ၏လူ ဦး ရေကိုတည်ငြိမ်စေသည် နှင့်အနာဂတ်နေထိုင်သူများအဘို့ကြီးစွာသောအသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးခဲ့သည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုသည်အကောင်းဆုံးအသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလာပြီး ၂၅ နှစ် (သို့) တစ်ရက်သာရောက်နေပြီ။ ပထမ ဦး ဆုံး Dutchtown လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်အရသာအသစ်များ၊ အဝတ်အထည်များ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်တက်ကြွသောရပ်ကွက်တစ်ခုကိုဖန်တီးသည့်လူနေမှုပုံစံများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်ကြသည် Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ်။ စိန့်လူးဝစ္စတွင်ကွဲပြားခြားနားဆုံး၊ ဤနေရာတွင်သာယာဝပြောမှုအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ Dutchtown အိမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဆိုတာကိုသံသယဝင်သူတွေကိုပြောပြရတာဂုဏ်ယူပါတယ်
Dutchtown အိမ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ခေါ်ပါတယ်။ ငါတို့အတူတူလာပြီးသူတို့ဘဝကိုအတိအကျမတူ၊ မနေထိုင်နိုင်သည့်အိမ်နီးချင်းများနှင့်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ရွေးချယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အိမ်နီးချင်းများ၏ Dutchtown ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလေးစားသည်။ မသက်ဆိုင်သူတို့နေသော၏ဘယ်သူချစ်ကြတာလဲ၊ သူတို့ဘယ်လိုပုံစံလဲ၊
သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းလိုပါကသင့်အားရရှိရန်စိတ်လှုပ်ရှားပါသည်။ သို့သော်သတိပေးပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းကိုသတိပြုမိပြီးတူညီသောအမှားများကိုနှစ်ကြိမ်ကျူးလွန်ရန်ပင်ပန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်နီးချင်းကိုလက်ခံရန်နှင့်ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒမရှိသောမည်သူမဆိုကိုစျေးကစားသူများ၊ အမြန်ပြင်ဆင်သူများ (သို့) ပိုဆိုးသည်ကိုရှောင်ကြဉ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့သို့သွားသောလမ်းကြောင်းသည်ဘုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်ဝေးလံသောအနာဂတ်သို့တိုးချဲ့နေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အင်္ကျီလက်တွေကိုလှိမ့်ပြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရမယ် Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ် ငါတို့အတိတ်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးငါတို့လက်ဆောင်ကိုဂုဏ်ပြုပြီးငါတို့အနာဂတ်အတွက်အတူတကွပြင်ဆင်ပါ။
သင်၏ Dutchtown ဂုဏ်ယူမှုကိုပြသရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ သင့်မှာကြားပါ Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ် ခြံနိမိတ် ဒီနေ့ သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းအမည်။
အောက်မှာ Filed ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ် နှင့် ဓါတ်ပုံပညာ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇူလိုင်လ 1st, 2020 .
ဒိန်းမတ် ဒိန်းမတ် သင် Dutchtown ဂုဏ်ယူနေပါသလား